Epic in every way!!! Samsung S21Ultra ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ ~ The ICT.com.mm Blog
Epic in every way!!! Samsung S21Ultra ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ
Ultra ဆိုတဲ့အတိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာ အားလုံးကိုနောက်ကောက်ချဖို့ Samsung S21 Ultra မှာ အသုံးပြုသူတွေလိုအပ်မဲ့ features တွေအားလုံးကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်နော်။ အမိုက်စား Zoom နဲ့ ကင်မရာစနစ်၊ 120Hz Display၊ တနေကုန်အားခံနိုင်တဲ့ ဘတ္ထရီတို့နဲ့အတူ S-Pen ကိုလည်း support ပေးထားပါသေးတယ်။ S21 Ultra က ဘာ့ကြောင့် အကောင်းဆုံး android စမတ်ဖုန်းဖြစ်နေရသလဲဆိုတာ ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
120Hz refresh rate ရှိတဲ့ 6.8” Dynamic AMOLED 2x display က စမ်းသုံးကြည့်ပြီးတာနဲ့ တခြားဖုန်းကို ပြောင်းမကိုင်ချင်တော့လောက်အောင် ချောမွေ့မြန်ဆန်မှုကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ အကြည်လင်ဆုံး Edge Quad HD+ resolution က မင်သက်သွားရလောက်အောင် အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီး တောက်ပတဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပြသပေးမှာမို့‌ နေရောင်အောက်မှာတောင် ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။
8K Video ဆိုတာက စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ resolution အမြင့်ဆုံး video ပါပဲ။ 8K Video Snap နဲ့အတူ ဗီဒီယိုထဲက အလှဆုံးပုံရိပ်တွေကို ပြန်ထုတ်ယူနိုင်တာကြောင့် ဗီဒီယိုရိုက်မလား? ဓာတ်ပုံရိုက်မလား စဉ်းစားနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Super Steady ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Galaxy S21 Ultra က အက်ရှင်ကင်မရာတစ်လုံးလို ရိုက်ကူးပေးမှာပါ။ AI stabilization နည်းပညာက တုန်ခါမှုတွေမပါဘဲ ဗီဒီယိုကို အငြိမ်ရိုက်ကူးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Super Smooth 60fps ဗီဒီယိုနဲ့ဆိုရင် အလင်းရောင်နည်းနည်းပဲရှိချိန်မှာတောင် လုံးဝချောမွေ့နေတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။ အမိုက်စား Dual Zoom (3x & 10x) စနစ်က ပုံရိပ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ကြည်ကြည်လင်လင် Zoom ဆွဲရိုက်ကူးနိုင်စေမှာပါ။ စတူဒီယိုထဲမှာရိုက်ကူးထားသလို မြင်ရမဲ့ Portrait Mode လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ခြစ်ရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့ ကမ္ဘာ့အမာကြောဆုံး Gorilla Glass တွေကို ကိုယ်ထည်ရှေ့ဘက်ရော၊ နောက်ဘက်မှာပါ တပ်ဆင်ပေးထားလို့ အမြဲတောက်ပနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းလေးကိုပဲ သင်ကိုင်နေရမှာပါ။ ကိုယ်ထည်က IP68 အဆင့်ရေစိုခံနိုင်မှုဆိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံ ရေစိုတာလောက်ကတော့ မှုစရာကိုမလိုပါဘူး။
Galaxy စီးရီးထဲမှာ အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Snapdragon 888 (5nm) processor နဲ့ RAM 12GB, Storage 256GB တို့က မြန်တာကိုမှ ကြိုက်သူတွေ လုံးဝနှစ်ခြိုက်သွားစေမဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေမှာပါ။
အရေးကြီးတဲ့သင့်ရဲ့ဒေတာတွေ ချိုးဖောက်မခံရဖို့အတွက် Knox security system နဲ့ Ultrasonic Fingerprint sensor တို့ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ 5G Mode နဲ့တောင် တရက်တာလုံးအားခံနိုင်တဲ့ S21 Ultra ရဲ့ Power-efficient display, processor နဲ့ 5000mAh (25W Fast Charging) ဘတ္ထရီတို့ ပေါင်းစပ်မှုကတော့ လက်ဖျားခါလောက်စရာပါပဲ။
Samsung ရဲ့ Flagship စမတ်ဖုန်းလေးကို Silver နဲ့ Black ဆိုပြီး အရောင်နှစ်ရောင်နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့ အောက်ပါလင့်လေးတွေကနေတဆင့် နှစ်သက်ရာအရောင်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီနော်။ ကဲ အခုပဲ မှာယူပြီး S21 Ultra နဲ့အတူ နေ့ရက်တိုင်းကို အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဖြတ်သန်းလိုက်တော့နော်။
For Silver, shop here: https://bit.ly/3AkcFTq
For Black, shop here: https://bit.ly/3DkzzvW
#ShopICT #Myanmar #Samsung #s21Ultra #Newarrivals #Orderonlinenow #ICT
Newer Laptop ဝယ်မယ့်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးရှိပါတယ်
Older အိုင်စီတီရဲ့ ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ် ဈေးရောင်းပွဲတော် Last Day OFFER